8HCl + K2Cr2O4 → 4H2O + 2KCl + 2CrCl3
koloriin koloriin Kalibaatyamyam biyaha chloride potassium chromium (iii) chloride
8 1 4 2 2 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 8HCl + K2Cr2O4 H 4H2O + 2KCl + 2ccl3
Waa maxay xaaladda falcelinta ee HCl
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo KCl (potassium chloride) iyo CrCl3 (chromium(iii) chloride)?
Dhacdada ka dib HCl (hydrogen chloride) waxay la falgashaa K2Cr2O4 (chromate potassium)
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda K2Cr2O4 K2Cr2O4 (Potassium chromate), oo baaba'aya
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 8HCl + K2Cr2O4 H 4H2O + 2KCl + 2ccl3
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta K2Cr2O4 (Potassium chromate)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee K2Cr2O4 (Potassium chromate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh K2Cr2O4 (Potassium chromate) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2O (potassium chromate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2O (biyaha) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee KCl (Potassium chromate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh KCl (potassium chloride) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CrCl3 (Potassium chromate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CrCl3 (chromium(iii) chloride) alaab ahaan?
8HCl + 2CrF4 → Cl2 + 2CrCl3 + 8HF
koloriin koloriin Chromium (IV) fluoride koloriin chromium (iii) chloride fluoride hydrogen
8 2 1 2 8 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 8HCl + 2CrF4 → Cl2 + 2ccl3 + 8HF
Waa maxay xaaladda falcelinta ee HCl (hydrogen chloride) ay kula falgasho CrF4
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Cl2 (chlorine) iyo CrCl3 (chromium(iii) chloride) iyo HF (hydrogen fluoride)?
Dhacdada ka dib HCl (hydrogen chloride) waxay la falgashaa CrF4 (Chromium(IV) fluoride)
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda Crf4 (Chromium (IV) fluoride), waa la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 8HCl + 2CrF4 → Cl2 + 2ccl3 + 8HF
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta CrF4 (Chromium(IV) fluoride)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CrF4 (Chromium(IV) fluoride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CrF4 (Chromium(IV) fluoride) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Cl2 (Chromium(IV) fluoride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Cl2 (chlorine) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee CrCl3 (Chromium(IV) fluoride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CrCl3 (chromium(iii) chloride) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee HF (Chromium(IV) fluoride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh HF (hydrogen fluoride) alaab ahaan?
5HCl + CrF5 → Cl2 + CrCl3 + 5HF
koloriin koloriin Chromium (V) fluoride koloriin chromium (iii) chloride fluoride hydrogen
(đậm đặc) (kh)
5 1 1 1 5 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 5HCl + CrF5 → Cl2 + CrCl3 + 5HF
Dhacdada ka dib HCl (hydrogen chloride) waxay la falgashaa CrF5 (Chromium(V) fluoride)
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda Crf5 (Chromium (V) fluoride), waa la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 5HCl + CrF5 → Cl2 + CrCl3 + 5HF
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta CrF5 (Chromium(V) fluoride)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee CrF5 (Chromium(V) fluoride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CrF5 (Chromium(V) fluoride) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Cl2 (Chromium(V) fluoride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Cl2 (chlorine) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CrCl3 (Chromium(V) fluoride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CrCl3 (chromium(iii) chloride) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee HF (Chromium(V) fluoride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh HF (hydrogen fluoride) alaab ahaan?
14HCl + K2Cr2O7 → 7H2O + 2KCl + 3Cl2O6 + 2CrCl3
koloriin koloriin Kalibaatyamyam; Kaliumotyamyam bichromate; Cusbada Dichromic acid dipotassium biyaha chloride potassium dichlorine hexoxide chromium (iii) chloride
14 1 7 2 3 2 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 14HCl + K2Cr2O7 H 7H2O + 2KCl + 3Cl2O6 + 2ccl3
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo KCl (potassium chloride) iyo Cl2O6 (dichlorine hexoxide) iyo CrCl3 (chromium(iii) chloride)?
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 14HCl + K2Cr2O7 H 7H2O + 2KCl + 3Cl2O6 + 2ccl3
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Cl2O6 (dichlorine hexoxide)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Cl2O6 (Potassium dichromate; Potassium bichromate; Dichromic acid dipotassium cusbo)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Cl2O6 (dichlorine hexoxide) alaab ahaan?